Football Khabar » ठूला टिम सकिए : एसी मिलान युरोपको एक मात्रै अपराजित टिम !
ठूला टिम सकिए : एसी मिलान युरोपको एक मात्रै अपराजित टिम !
युरोपियन टप–५ लिगमा जारी सिजन इटालियन क्लब एसी मिलान युरोपको एक मात्रै अपराजित टिम बनेको छ । वर्ष २०२० अन्तर्गतका लिग खेल सकिँदै गर्दा मिलानले मात्रै अपराजित यात्रा कायम राख्न सकेको छ । इटालियन सिरी ए लिगबाहेक स्पेनिस ला लिगा, इंग्लिस प्रिमियर लिग, जर्मन बुन्डेसलिगा र फ्रेन्च लिग वानमा सबै लिगमा सबै टिम पराजित भइसकेका छन् ।
यो सिजन एसी मिलान शानदार लयमा अघि बढिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता लिगको टप–६ मा रहनकै लागि संघर्ष गरिरहेको मिलान यो सिजन उपाधि होडमा अघि बढेको छ । वर्ष २०२० का खेल सकिँदा मिलान लिगको शीर्ष स्थानमा स्पष्ट अग्रतासहित रहेको छ ।
ताजा स्थितिमा एसी मिलानले १४ खेलबाट ३४ अंक जोडेको छ । उसले १० खेल स्पष्ट रूपमा ४ खेल बराबरी गर्दा कुनै पनि खेल हारेको छैन । सिरी ए लिगमा साबिक विजेता युभेन्सले यो सिजन १३ खेल खेल्दा ६ खेल जितेको छ । त्यस्तै, ६ खेल बराबरी गरेर १ खेल हारेको छ । युभेन्टस यतिबेला लिगमा ठूलै संघर्ष गरिरहेको छ ।
यता, स्पेनिस ला लिगामा लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिडले १३ खेलबाट ३२ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । उसले हालसम्म १ खेल हारेको छ । रियल मड्रिडले ३ र बार्सिलोनाले ४ खेल हारेका छन् । यो सिजन लिगमा बार्सिलोना कमजोर स्थितिमा छ ।
यता, फ्रेन्च लिग वानमा लियोन १७ खेलपछि ३६ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा छ । उसले हाससम्म मात्रै १ खेल हारेको छ । दोस्रो स्थानको लिलेले पनि १ खेल हार्दा साबिक विजेता पिएसजीले भने ४ खेल हारिसकेको छ ।
यता, प्रिमियर लिगमा पनि अपराजित टिम कोही बाँकी छैन । सबै टिमले एक न एक खेल हारिसकेका छन् । सबैभन्दा कम लिग लिडर लिभरपुलले १ खेल हारेको छ । त्यसैगरी, आठौं स्थानको म्यानचेस्टर सिटीले २ खेल र तेस्रो स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेड, चेल्सी र टोटनह्यामले समान ३–३ खेल हारेका छन् ।
यता, बुन्डेसलिगामा पनि यो सिजन कुनै अपराजित टिम बाँकी छैनन् । साबिक विजेता बार्यनको पनि अपराजित यात्रा पनि टुंगिसकेको छ । ताजा स्थितिमा बार्यन, बायर लेभरकुसेन, आरबी लेइपजिग, उल्भ्सवर्ग र अर्मिनियाले समान १–१ खेल हारेका छन् । बार्यन १३ खेलबाट ३० अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १० पुष २०७७, शुक्रबार ०९:१४